Garde shower - iSearch
सुरु बगैचा बगैचा आराम बगैचा शवर
एक बगैचा शवर बढी भूमिमा फेला पर्यो। यो किनभने तातो गर्मी दिनमा स्फूर्ति, यो प्रयोग गर्न अद्भुत छ र प्रयोग गर्न सकिन्छ र पूल एक पूरक रूपमा स्नान अघि ठंडा रूपमा यसको विभिन्न संस्करण मा, अचम्मको छैन। यस उद्देश्यका लागि, यो अझै पनि लागत-प्रभावकारी र अन्तरिक्ष बचत हो, र यसको सानो सानो टुक्रामा यसको स्थान पत्ता लगाउन सकिन्छ। मिठास बागवानी पछि वा गर्मी मा एक लामो दिन पछि घर आए र सूर्य, चिसो बाहिरी शवर खडा - बस अद्भुत। विशेषगरि बच्चाहरु यस खुशीको साथ धेरै खुसी छन् र फेरि पनि पानी अन्तर्गत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
1 बगैचाको बाढी कस्तो छ?
2 बगैचाको न्यानो चयन
3 बगैचाको बाढीले कसरी काम गर्दछ र यो कसरी बनाइएको छ?
3.1 स्थायी रूपमा स्थापित खाना पकाउने बौछार
3.2 खाना पकाउनको लागि ठाउँ चयन गर्नुहोस्
3.3 बगैचाको बावरबाट पानी प्रयोग गर्नुहोस्
3.4 बगैचाको न्यानोको लागि नाली
3.5 बगैचाको न्यानोको लागि बगैचाको नली बिर्सेर
4 त्यहाँ किस प्रकारको बगैचा भराई छ?
4.1 चिसो पानी वर्षा:
4.2 तातो स्नान:
4.3 सौर स्नान:
5 बगैचाको बगैचाको हेरविचार र सफाई
5.1 सौर जडानको बगैचा बागको रखरखाव
6 यी कपडाहरू सिफारिश गरिन्छन्
7 कपडाका निर्माताहरू
8 बगैचाको बौछारको मूल्य के हो?
9 तपाईं आफ्नो बगैचा शावर कहाँ राम्रो खरीद गर्नुहुन्छ?
10 बागवानी तौलिया किन्न जब तपाईलाई ध्यान दिनुपर्छ?
11 बगैचाको बौछारको इतिहास
12 बगैचा स्नान र वातावरण
13 बगैचाको बौछारको लागि दृश्य सुरक्षा
14.1 संयोग: यदि नली क्षतिग्रस्त भाग हो भने, यसलाई पूर्ण रूपमा बदल्न को लागी छैन। क्षतिग्रस्त क्षेत्र काट्न र नली चाल वा नयाँ टुक्रा सम्मिलित गर्न पर्याप्त छ। त्यहाँ प्लास्टिकको कन्टेनरहरू छन् जसको नली जडान हुन सक्छ।
बगैचाको बाढी कस्तो छ?
बगैचा शावर एक सरल बौछार सेट हो, जुन बाहिर छ र प्राय: केवल स्नान छ पानी आपूर्ति mains बगैचा नली। त्यो हो, यो नली को माध्यम ले पानी संग खिलाया जाता छ र यसैले सामान्य मामला मा ठंडे पानी प्रदान गर्नु पर्छ। तथापि, त्यहाँ अपवादहरू छन् (तल हेर्नुहोस्) जहाँ गर्म पानी पनि सम्भव छ। सामान्यतया बगैचा शवर गर्मीको समयमा स्विमिंग पूलमा एक स्थानान्तरण वा पूरकको रुपमा प्रयोग गरियो र जाडोमा हटाइयो।
एक छनौट बगैचा शवर
यस बीच ग्राहक मा हुन सक्छ बगैचा वर्षा उत्कृष्ट छनौट हेर्न। सबैभन्दा सस्तो सरल मोडेल निर्माण र बगैंचा मार्केटहरू साना पैसाका लागि उपलब्ध छन्। तर पनि डिजाइनर वर्षा प्रस्तावमा छन्, ती व्यक्तिहरूका लागि बगैंचामा गर्मीको लागि दोस्रो घर बनाउन मनपर्छ। केही भेरिएन्टहरू डिजाइन गरिएका छन् ताकि तिनीहरूले खुलामा ओभरराइटर गर्न सक्छन्। धेरै उच्च गुणस्तर बगैचा वर्षा धेरै अलग बौछार टाउको र सिर टाउको छ ... यसैले यहाँ सबैलाई बाक्लो छ कि उसले के गर्न र प्रयोग गर्न चाहन्छ। विभिन्न कम्पनीहरू प्रस्ताव गर्छन् बगैचा वर्षा सरल देखि लक्जरी।
यसले कसरी काम गर्दछ बगैचा शवर र यो कसरी बनाइएको छ?
नियमको रूपमा, यो एकदम सरल पेटेंट हो। को बगैचा शवर बगैचा नलीको लागि एक जडान छ र एक जमीन को द्रव। यसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि स्नान, कहीं पनि महान संरचनात्मक कार्य को बिना पनि राखन सक्छ। निर्माणको लागी तपाईले मात्र इच्छित ठाउँ खोज्न सक्नु भएको छ, सहि सकेको रूपमा, पृथ्वीले दृढ खडाको लागि स्पिट गर्दछ र बगैचा नली बन्द गर्दछ। पहिले नै पानीको आनन्द सुरु हुन सक्छ।
तपाईं एक काठ को गेट को निर्माण या खरीद सकते हो, जो कि घास मा स्नान को तहत राखिएको छ। त्यसोभए खुट्टा सफा रहन्छ, भित्ता र धेरै भिरालोबाट निस्सन्देही माटो केहि हद सम्म कम हुन्छ। पैदल यात्रा, आदि पनि यो उद्देश्य पूरा गर्दछ।
स्थायी रूपमा स्थापित बगैचा शवर
यदि तपाईं सही छनौट निश्चित हुनुहुन्छ भने, बगैचा शवर लाई स्थायी रूपमा स्थापित गर्न मन पर्छ। तपाईं यो एक अवस्थित पर्खाल, एक छत वा केहि चीज र सजावट स्नान, स्क्रिन वा उच्च बिरुवाहरू स्थापित, र यदि तपाईं चाहानुहुन्छ पनि यसलाई पछाडि गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। ढलानमा रहेको इलाकाको लागि, यो तदनुसार नालीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो आवश्यक भएमा एक वास्तविक सिर्जना गर्दछ सानो बाथरूम बगैचाको लागि।
को लागि ठाउँ बगैचा शवर चयन
एक निश्चित लागि बगैचा शवर पाठ्यक्रम धूप छान्नु पर्छ। तर अझ बढी महत्त्वपूर्ण आधार हो। आदर्श एक ठोस काठ को फर्श हो। यदि बजरीको साथमा छत छ भने, फुटपाथ आदि, एक काठको टुक्राले खुट्टालाई छोड्नुपर्छ। एक विकल्प लगभग एक क्यूबिक मीटरको क्युबाइड खोल्न र बजरी संग भर्न हुनेछ। यसले पानीलाई लान मा मिड स्पेस सिर्जना नगरी दूर छोड्न अनुमति दिन्छ। (अध्याय "आउटफ्लो" हेर्नुहोस्)
पानीको बगैचा शवर प्रयोग
यदि एकलाई सिलाज बुझ्न सम्भव छ भने, राम्रो तरिकाले विचार गरिनै पर्छ, कुन एक बगैचाको स्नान गर्न चाहनुहुन्छ। गर्मीमा हरियो स्नानको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ, यसैले शवर जेल, शैम्पू र सह, अपशिष्ट जललाई छिट्टै सीवेज प्रणालीमा एक तरिका खोज्नु, बेसिन एकत्रित भट्टीमा छ, किनकि यसले बगैचामा बिरुवा र लनलाई क्षति पुर्याउँछ। यद्यपि, यदि तपाइँ पक्का हुनुहुन्छ कि स्नानले "फ्रिज" मात्र तातोपानीको रूपमा मात्र हो र केवल खाली पानीको साथमा, जम्मा पानीको बहावमा बहादुरी गर्न सकिन्छ। त्यसैले बहुमूल्य गीलो दुई पटक प्रयोग गरिन्छ - वातावरण र पैसा बक्सको लागि राम्रो कुरा।
बाहिरको लागि बहिष्कार बगैचा शवर
चाहिए बगैचा शवर एक निश्चित नाली, ताकि जमीन मा एक नै स्थान मा धेरै रन नहीं, बजरी संग लेच को गड्ढे को संभावना छ, माथि उल्लिखित। "दाँया" नाली, जस्तै सीवरको जडान, अधिक गाह्रो र अधिक जटिल छ, तर सफा समाधान। केहि निर्माताहरु बगैचा वर्षा एक ड्रेन प्रदान गर्नुहोस् जुन सीधा ड्रेन पाइपमा स्थापना गर्न सकिन्छ। यस्तो एक नाली सामान्यतया एक सिफोन छ, यो एक सिफोन हो जाल खडा पानीको माध्यमबाट, ताकि सीवरबाट कुनै गंध बाहिर निस्कन्छ, सिसाजको लागि अन्य जडानको साथ। तथापि, स्थापनाको लागि बगैचा शवर एक जल निकासी पाइप, जुन घर को सीवरेज संग जोडिएको छ। यस प्रयासको कारण कमेन्ट हुनु हुँदैन, जबसम्म एक सिजर पाइपलाइन नजिकै सिसाज पाइपलाइन नजिक छ, वा तिनीहरूको पाठ्यक्रम अझै पनि चयन गर्न सकिन्छ, उदाहरणको लागि, किनभने घर नयाँ बनाइन्छ। त्यसपछि तपाईं बगैचामा बगैंचामा बर्बाद पानी जडान विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
[asa2_smart_collection tpl = "स्तम्भ_layout" ajax = "1" सीमा="4" associate_id_set = "isearch" orderby = "rand" = "garden shower" /]
बगैंचाको नलीको बिछाडि बगैचा शवर
पछि बगैचा शवर स्थापित गरिएको छ, बगैचा नलीको स्थापना पानीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दछ। आदर्श रूप मा, बगैचा नली पृथ्वीको सतहमा। यो लाभ छ कि सूर्य नली मा पानी भर्खरै हिट गर्दछ। तर यदि नली समस्याग्रस्त छ भने, यो पृथ्वीको सतहभन्दा कम सेन्टिमिटर पनि राख्न सकिन्छ।
यदि तपाईं सूर्यको गर्मी को प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, हरियो बगैचा नली सिफारिस गरिन्छ। यो झाडा र फूलको तहमा सजिलै पठाइन्छ, त्यसकारण दृष्टि नपाउँदैन, तर सूर्यले पानीलाई अझ गर्मी पार्न सक्छ। चूंकि खाली (!) होस जाडोमा बगैंचामा रहन सक्दछ, भित्तालाई सफा गरिएको छ तापनि, यो धेरै प्रयास बिछाडि पनि सार्थक छ। यसको मतलब हो कि नली "waxed" ठीक तरिकाले हुन सक्छ र केवल यो सुनिश्चित गर्न यो निचोड वा क्षतिपूर्ति छैन।
संयोग: यदि नली क्षतिग्रस्त भाग हो भने, यसलाई पूर्ण रूपमा बदल्न को लागी छैन। क्षतिग्रस्त क्षेत्र काट्न र नली चाल वा नयाँ टुक्रा सम्मिलित गर्न पर्याप्त छ। त्यहाँ प्लास्टिकको कन्टेनरहरू छन् जसको नली जडान हुन सक्छ।
कस्तो प्रकारको बगैचा वर्षा त्यहाँ छ?
बीचमा, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका छन् बगैचा वर्षा, जिसके तहत खरीदार चयन गर्न सक्छ।
हल्का पानीको वर्षा र विशेष गरी आरामदायक र पर्यावरणको अनुकूल:
गरौं एक नजिकको नजर। चिसो पानीको छाला आविष्कारको मूल हो बगैचा शवर, यो नली को माध्यम ले ट्याप पानी संग जोडिएको छ र ट्याप पानी को तापमान (सामान्यतया लगभग 10 डिग्री सेल्सियस) संग बनी।
चिसो पानी वर्षा:
कम खरिद लागत
लचीलो स्थान (कुनै पनि समयमा परिवर्तनयोग्य)
जाडोमा चाँडै हटाइयो
पानीको तापमानको कुनै नियमन छैन
केहि स्थिर र प्राय: यति लामो समयसम्म टिकाऊ
तातो पानीमा न्यानो पार्छ बगैचा शवर घरको गर्म पानीको आपूर्तिमा। त्यसपछि बाथरूम बाथरूम जस्तो छ - तपाईं सजिलै संग पानी को तापमान नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
पानीको तापमान नियन्त्रित
स्थिर स्थापना - त्यसैले स्थिरता
ऊर्जा खर्च, बगैचाको लागि पानी गरम हुन्छ
उच्च अधिग्रहण लागत
आवश्यक तातो पानीको जडान, त्यसैले उच्च निर्माण लागत
एक विशेष सुविधा Solarduschen हो। यो पर्यावरणको अनुकूल मित्र हो कि पानी उचाल्न न्यानो पानीको सान्त्वनाबाट बच्नको लागि आदर्श हो, तर अझै पनि कुनै पनि अतिरिक्त लागत लाग्ने छैन। सोल्डर्डुचेले बगैचाको नलीको रूपमा ठुलो पानीको चौरमा आफ्नो पानीको प्रवाह बसाल्दछ। तथापि, बौछारमा solartank छ जसमा पानी सौर ऊर्जा द्वारा गरम गरिएको छ। यो 60 डिग्री सम्म हुन सक्छ। त्यसपछि तपाईं एक क्लासिक शरिरको रुपमा चल्नु हुन्छ - टैंकबाट पानीले एक हात मिक्सर को माध्यम ले नली को ठंडा पानी संग मिश्रित हुन्छ।
चिसो र तातो पानीको पानी सम्भव हुन्छ (विनियमन)
खरिदमा राम्रो मूल्य
कुनै अतिरिक्त ऊर्जा खर्च, र अझै पनि न्यानो पानी
स्थिर माउन्टिंगको कारण स्थिरता
उच्च रखरखाव व्यय (लेगुनीला)
JOM सौर स्नान, बगैचा स्नान, एकल-लीभर मिक्सर ट्याप र कालो वर्षा वर्षा स्नान टाउको सहित कालो, अतिरिक्त नल सूचक संग २ मिटर अग्लो
गोल्ड टाउको 15 एक्स 15cm बबल संयुक्त संग,
एकल लीजर मिक्सर ब्याट्री, चिसो / तातो
20 लीटर पीवीसी टैंक, ऊँचाई: माथि टाउकोमा 200cm, मिश्रित ब्याट्री 100cm, 41 सेमी ट्याप गर्नुहोस्
अतिरिक्त पानी ट्याप र मानक बगैचा नली जडान संग
को हेरविचार र सफाई बगैचा शवर
हेरविचारको अवस्थामा, यो हो, निस्सन्देह, मुख्यतः जसको कुरा सामाग्री हो बगैचा शवर त्यहाँ। सामग्री जंगली-मुक्त भएकोले स्टेनलेस स्टीललाई धेरै हेरचाह चाहिन्छ। तथापि, त्यस्तो वर्षाले आफ्नो चमक गुमाउन सक्छ र यसरी मौसमको माध्यमबाट उनीहरूको सुन्दर दृश्य देख्न सक्छ। यस अवस्थामा, पोलिश (औषधी बजार मार्केट) प्रयोग गरी विशेष रूपमा यो सामग्रीको लागि बनाइन्छ।
मा बगैचा वर्षा काठबाट बनेको, तपाईं काठको फर्नीचर, मोम र तेलको लागि समान स्रोत प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन यो उद्देश्यको लागि उद्देश्य हो। काठ आम तौर मा निर्माता द्वारा अप्रत्याशित छ ताकि यो मौसम को बिरुद्ध सुरक्षित छ। तर यो आफैले लाभ उठाउँछ र समय समयमा समय नविकरण गर्नुपर्छ। यसबाहेक, काठले यो उपचार पछि धेरै सुन्दर र भित्ता देख्छ।
एक हेरविचार बगैचा शवर सौर जडान संग
Solardusks लाई अधिक हेरविचार चाहिन्छ किनभने खतरनाक लेगुनीला भण्डारण गरिएको न्यानो पानी द्वारा बनाइन्छ। यी ब्याक्टीरिया सबै ठाउँ जहाँ पानी लामो हुन्छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा, तिनीहरूले ईश्वरको रोग र बीमारीको नेतृत्वको रूपमा शरीरमा पाउँछन्। यस कारणको लागि पानी धेरै दिनको लागि खडा हुनुपर्दछ र त्यसपछि प्रयोग गरिने हुनुपर्दछ, तर सधैँ स्नानबाट ताजा हुनुहोस्।
यो बगैचा वर्षा सिफारिश गरिएको छ
नेक्सक्सक्स एसडीएक्सएनमक्सएक्स सोलार्डुचे
Nemaxx SD100B Solardusche 35 यूरोमा उपलब्ध छ। ट्यांक पीवीसीबाट बनाइएको छ र 35 लेटर राख्छ। तापमान नियन्त्रण असीमित चर र ठोस आधार ठोस आधार प्लेट द्वारा निश्चित छ। बारम्बार बौछार हेड स्विंग योग्य छ - पानीको तापमान 60 डिग्री सम्म हुन सक्छ।
STILISTA बगैचा बौछार क्यास्टाटा 100 बाट बनाइएको FSC प्रमाणित Shorea दृढ काठ, हात स्नान सूचक सहित तेल
अतिरिक्त हात शावरको साथ 100% FSC प्रमाणित Shorea हार्डवुडबाट बनेको STILISTA काठ बगैंचाको स्नान। पौंडी स्नान सौना शावर गार्डेन शिविर, काठको स्नान
उचाई: करीव 210 सेमी / आधार: 61 सेमी x 61 सेमी / शावर टाउको: ly स्वतन्त्र घुमाउने बल हेड / एल्युमिनियम ट्यूबको साथ 15 सेमी: N 1,7 सेमी / तौल: 11 किलो
अतिरिक्त ह्यान्ड शावर सहित: N6सेमी 97,5 सेमी स्नान युनिभर्सल पानी कनेक्शन (3 /4इन्च) - मानक बगैंचा होजहरू सहित 1 इन्च जडानहरूका लागि एडाप्टर।
सामग्री: मौसम प्रतिरोधी उष्णकटिबंधीय तेल Shorea हार्डवुड (FSC प्रमाणित) शावर टाउको, नुहाउने टाउको, क्रोम प्लेटेड एकल-लिभर मिक्सर र पुल लीभर
स्टेनलेस स्टील स्नान नली, स्टेनलेस स्टील पाइप, उच्च गुणवत्ता ब्रास स्क्रू
Stilista®बगैचा शवर Cascata
यो बगैचा शवर 80 यूरो को तहत लागत र एक स्वतंत्र रूप देखि घुमावदार बौछार को टाउको छ र एक दोस्रो ब्रुसेकोपर्फ संग आउछ। पानीको जडान सामान्यतया ¾ इंचसँग मेल खान्छ ताकि साधारण बगैचा नली जडान गर्न सकिन्छ। उष्णकटिबंधीय काठ जसबाट स्नान गरिएको हुन्छ मौसमको प्रमाण गरिएको छ। हेडहेड, एकल लेजर मिक्सर र पुल लीभर जस्ता सामानहरू क्रोम गरिएको छन्।
Kärcher बगैचा शवर
साथै प्रसिद्ध उद्यम क्रेचर एक प्रदान गर्दछ बगैचा शवर जुन धेरै सस्तो छ। यो 30 यूरो अन्तर्गत खरिद गर्न सकिन्छ। यसमा एक क्षेत्री रिक्ति छ र ऊँचाई-समायोज्य छ, एक डिसेम्बरयोग्य बौछार र सिंचाई पट्टी र एक विस्तृत स्नानघर जेट छ।
धेरै धेरै फरक बगैचा वर्षा प्रस्तावित छ। चयन मात्र प्रकार र मूल्यमा फोकस गर्न सक्दैन, तर उपस्थिति र सामग्रीमा पनि।
निर्माताहरू बगैचा वर्षा
धेरै भिन्न निर्माताहरू अब ल्याउँछन् बगैचा वर्षा बजारमा। हामी यहाँ केही यहाँ परिचय चाहन्छौं, यद्यपि, त्यहाँ छ, कुनै पूर्णता।
बागवानी उपकरण र उद्यान सामानको निर्माता पनि बजारमा बौछार छ। यो स्थापना गर्न सजिलो छ र धेरै सस्तो प्राप्त गर्न।
आदर्श ओक वन
त्यहाँ यहाँ एक व्यापक वर्गीकरण छ बगैचा वर्षा, सोलारसस व्यंजनहरू पनि प्रस्तावमा छन्, जस्तै पानीको पानीको वर्षा र चिसो पानीको व्यञ्जनहरू।
मर्न बगैचा वर्षा यस निर्माता को विशेष रूप देखि मजबूत गरिन्छ र स्टेनलेस स्टील देखि बनाइन्छ। इटालियन डिजाइन पनि प्रभावशाली छ।
एक इटालियन पनि - भित्तामा डिजाइन र उपकरण विविधताहरूको एक विस्तृत चयन छ। यो सबै उचित मूल्यहरु मा - वर्षाहरु को कारण लोकप्रिय छैन।
ईनक्सस्टाइल उद्योग मूल्य को रूप मा संदर्भित गर्न सकिन्छ। उहाँ बीचको शीर्ष उत्पादकहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ बगैचा वर्षा, निम्न लागू हुन्छ: उही मूल्यमा उच्च गुणस्तर।
एक बगैचा शवर जे-ओ द्वारा एक विशेष सुविधा हो। फोकस डिजाइनमा छ। यद्यपि, एक बहुमुखी वर्गीकरण प्रदान गरिएको छ।
बगैचाको बौछारको मूल्य के हो?
मूल्यका लागि बगैचा वर्षा धेरै फरक छ। साधारण सेन्टरबाट हार्डवेयर पसल वा अनलाइन पसलबाट केही यूरोहरूका लागि उपलब्ध छन्। 50 यूरो सम्म जमीन स्पेस वा पैडस्टेल लागतको साथमा केहि राम्रो संस्करणहरू, तर पहिले नै राम्रो गुणस्तर हो। सिद्धान्तमा, सोल्लारसले थोपा बढी महान् विकल्पहरू छन् किनभने तिनीहरूसँग पानीको ट्यांक पनि छन्। यहाँ एक 100 यूरो को लागत संग लगभग आशा गर्न सक्छ।
यदि तपाईं बढी खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एक डिजाइनर स्नान गर्न सक्नुहुन्छ। यी सामान्यतया उपयुक्त उपकरणहरू छन् र धेरै सय यूरो खर्च गर्न सक्दछ। सबैभन्दा महंगी महोत्सव हो, जुन घरबाट हट पानी जडानको लागी हो। किनभने यहाँ, खरिदका अलावा, विधान पनि भुक्तानी योग्य छ र गरम पानीको सम्बन्ध। यसको अतिरिक्त, जब तपाई बगैंचा ऊर्जामा बाहिरी भान्सा साथै बाथरूममा खरिद गरिन्छ।
कहाँ किन्न बगैचा शवर उत्तम
बगैचा वर्षा विशेष स्टोरहरूमा उपलब्ध छन्, तर हार्डवेयर स्टोरहरूमा पनि, र निश्चित रूपमा अनलाइन। साधारण मोडेलहरू अब हरेक हार्डवेयर भण्डारमा उपलब्ध छन्, कहिलेकाहीँ पनि डिस्काउटरमा। तिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत भागहरूमा हस्तकार्टनमा प्याकेज गरिएका छन् र त्यसो गर्न सजिलो छ। Pedestal साथ ठूला र अधिक व्यापक मोडेलहरूका लागि यो तिनीहरूलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ कि तिनीहरूलाई खरीद गर्न सिफारिस गरिन्छ। यो ठाउँमा खरीद गर्दा फायदेमंद छ, त्यो बगैचा शवर अधिक सटीक आवर्धक ग्लास को तहत। सीमित चयन एक हानि हो। तपाईंले पहिले नै एक निश्चित लागि रोज्नुभएको छ बगैचा शवर , त्यसपछि तपाइँ सजिलै तिनीहरूलाई स्थानमा किन्न सक्नुहुन्छ।
मनपर्ने अनलाइन व्यापार हो, जहाँ तपाईं धेरै फरक मोडेलहरूबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र तुलना गर्नुहोस्। विभिन्न तुलना पोर्टलहरूले पनि यो लिन्छन् र एक नज़रमा विभिन्न मोडेलहरूको प्रविधि र विपक्ष देखाउँछन्।
तपाईले के गर्नुपर्छ कि? बगैचा शवर को लागि बाहिर हेर्न?
सबैभन्दा पहिला, आवश्यकताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ: यदि यो प्रयास गर्न र स्थान परिवर्तन गर्न रमाइलो छ, र अन्यथा कुनै उच्च मागहरू छैनन्, यो सस्तो मोडेल र रास्ते र लाभको लागि राम्रो तरिकाले सहज हो। बगैचा शवर पहिलो।
यदि तपाईं जान्नुहुन्छ कि तपाईले वास्तवमा के चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले लामो-जीवन मोडलहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, किनकि स्थापनाको प्रयास केहि हदसम्म उच्च हुन सक्छ, जुन तपाईं हरेक वर्ष दोहोर्याउन चाहनुहुन्न। यो अधिक महंगा मोडेलको लागि अधिक महंगा मोडेल र उच्च गुणस्तरको सामग्रीहरूमा ध्यान दिन सिफारिस गरिन्छ। यसबाहेक, विभिन्न स्नान प्रमुख र सहायक उपकरणहरू र सहज बौछारको लागि समायोजन हुनुपर्छ। कहां र कसरी स्नान गर्ने माउन्ट गरिएकोमा निर्भर गर्दछ, सबै भन्दा राम्रो यो सुनिश्चित गर्न को लागी सम्बन्धित भित्ता शावर मा प्रदान गरिएको छ वा संलग्न को लागी सामाग्री संलग्न छ।
को इतिहास बगैचा शवर
आफैलाई शोषण गर्दै, त्यो सफाईको लागी शरीरमा चल्ने पानी भन्नु, आधुनिक युगको आविष्कार होइन। यो पहिले नै ग्रीस ग्रीसमा अवस्थित थियो। यो मोड प्रकृतिमा झरना थियो। तर जब सम्म बौछारहरू भवनहरूमा घुसिसकेका छन्, यसले अझै धेरै समय लाग्छ। 18 मा। र 19। 13 औं शताब्दीमा यो सेनाहरू र जेलहरू थिए, जुन पहिल्यै भित्तामा फर्किएँ जब बेसिनहरू र बाथटबहरू धोएर सामान्य थिए। पछि, तिनीहरूले सार्वजनिक स्नानमा प्रवेश गरे। त्यो स्नानघर संग एक अपार्टमेंट को बाथरूम सुसज्जित थियो, 20 को दोश्रो भाग मा आउँछ। सताब्दी।
तर गर्मीमा बालबालिका नलीको साथ बच्चाहरु छिद्रण गर्ने विचार, जुन सधैँ मजा आयो, समानांतरमा सञ्चालन गरिएको थियो। केवल अन्तिम अनुमान मा। 20 साल एक बगैचा नली एक चारा को लागि एक फिड देखि बनाउन को लागि आए, जो सरल जस्तो सरल छ। आज हो बगैचा शवर गर्मीको बिरुवामा एक पूलको सट्टामा वा बगैंचामा एक लोकप्रिय सहायकको लागि पूरकको रुपमा।
बगैचा शवर र वातावरण
पानीको प्रयोग हो, निस्सन्देह, एक पर्यावरणीय पक्ष पनि। यद्यपि यदि पानी गर्म छैन भने, जो अतिरिक्त ऊर्जा खर्च गर्दछ, पानी, विस्तृत रूपमा प्रशोधन गरिएको छ, उपलब्ध गराइनेछ। तथापि, यो एक को लागि पानी प्रयोग गर्न सम्भव छ बगैचा शवर (माथि उल्लिखित, निस्सन्देह, कस्मेटिक्स को बिना) र कास्टिंग को लागि प्रयोग गरे। यो सब भन्दा उत्तम प्रयोग हो।
को लागि दृश्यात्मकता बगैचा शवर
चाहे स्नान सूटमा वा नग्न पनि - कम्तीमा चाहानुहुन्छ बगैचा शवर उत्सुक छिमेकीहरूले हेरे। विशेष गरी ती मानिसहरू बगैचा शवर गर्मीमा पनि दैनिक शरीरको हेरविचारको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, आफुलाई उनीहरूको बौछारको लागि राम्रो दृश्य संरक्षणलाई विचार गर्नुहोस्। यसको लागि धेरै सम्भावनाहरू छन्। झाडी र हेजको सुरक्षामा, छाया राम्रोसँग उपयुक्त छ। तर यी सही स्थानमा मौका नगर्दा, तिनीहरू बढेको केही समय अघि लाग्छन्। बीचमा एक परिष्कृत सुपरस्टर्बर्चर संग काम गर्न सक्छ। त्यहाँ एकै ओर, सरल तरिका, जस्तै दृश्यता बाधाहरु को लागी तत्वहरु जस्तै भवन बजार मा, वा आउटडोर उपयोग को लागि स्क्रीन पनि। यद्यपि, यदि तपाईं आफैलाई केहि निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ, जुन अझै पनि उष्णकटिबंधीय स्वर्गीय हुन्छ, बगैंचामा वा विशेष रूपमा एक विशेष सुविधा, कल्पना कुनै सीमा छैन।
उदाहरणका लागि, सबै बाकस वरिपरि बासुको विभिन्न प्रकारको निर्माण गर्न सम्भव छ। मार्श लेवीहरूको प्रयोग गर्न पनि सम्भव छ जुन पत्थरहरूसँग विस्तार गर्न, जहाँ तिनीहरू चाहन्छन्। साथै एक Bretterzaun राम्रो लाग्न सक्छ र बाहिर बाट पनि अझै घास, जो पनि पर्खाल को लागि पनि सही छ।
स्क्रिन तत्वहरू पनि द्वारा निर्मित गर्न सकिन्छ। एक काठको फ्रेम, जुन विभिन्न तरिकामा भरी छ, छिट्टै निर्माण गरिएको छ। यो तार जाल, पौधे, plexiglas वा गिलास संग, जो पेंट गरिएको छ। निस्सन्देह, कुनै पनि किसिमको काठ भित्ता पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
वा तपाईं रोड फूलपट्टिको उचाइ उचाइमा फाँट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन त्यसपछि रोपिएको छ। तिनीहरू जीवित बाड़ वा भिसा बनाउँछन्। वैसे: अन्धकार वा दुश्मनमा स्नानको लागि, सौर लैंप धेरै राम्रो स्थापना गर्न सकिन्छ। तिनीहरू कुनै पनि अतिरिक्त बिजुली खर्च गर्दैनन्, तर गर्मीमा चाँडै शुल्क लगाइदिन्छ र त्यसपछि बाटोमा वा स्नानमा हल्का पार्छ। यससँग, सुन्दर उच्चारणहरू सेट गर्न सकिन्छ जुन दृश्यलाई बगैंचामा रोमांटिक बनाउँछ। हरेक किसिमको प्राकृतिक सामग्री संग, धेरै डिजाइन प्राप्त गर्दछ, जसले दृश्य संरक्षण को उद्देश्य पूरा गर्दछ। यदि तपाईं निर्माण गर्न र आफैलाई निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग धेरै रमाइलो हुनेछ। धेरै बाढीहरू जस्तै विशेष ढुङ्गा वा काठ बाम आदि। यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र एक अनौठो टुक्रा बनाइनेछ, जुन बाग मा एक व्यक्तिको आक्रोशमा स्नान गर्नेछ।
बगैचा वर्षा एक प्लान को लागि एक लोकप्रिय खरिद हो, यहां सम्म कि यदि यो एक पूल को लागि धेरै सानो छ। गर्मीको मौसममा उच्च तापमानमा हप्प गर्ने र सूर्यको उज्यालोमा चिसो पानीमा पसेर धेरै व्यक्तिले छुट्टीमा छुट्याउन छाड्न सक्छ। यसबाट बगैचा शवर सानो ठाउँ, र सरल मोडेलहरू खरिदमा महँगो हुँदैनन्, म हरेक व्यक्तिको लागि एक गर्मीको मज्जाको बारे मा कुरा गर्दै छु कि साजिश। एक मात्र आवश्यकता पानीको जडान वा बगैचा नली हो, जसको साथ पानी स्नानमा लगाइएको छ।
खरीद गर्दै बगैचा शवर सिफारिश गर्न सकिन्छ किनकि यो बच्चाहरु संग एक परिवार मा विशेष गरी मजा छ।